Ungazivikela kanjani izimpukane ekulumeni izindlebe zenja yakho | Izinja Zomhlaba
Sonke silithanda ihlobo, njengoba kuyisikhathi sokushisa nobumnandi. Kepha futhi lapho ukwanda kwezimbungulu nezinambuzane, kufaka phakathi i- izimpukane, ezisiluma ngisho. Kunezinja eziningi eziheha izimpukane, ngendlela efanayo nokuthi kunabantu abakhanga omiyane kakhulu kanti abanye abazi. Uma kuwuhlobo lokuqala nenja yakho, kungcono unake le mininingwane.
Uma sikhuluma ngqo nge izindlebe zezinjaKungenxa yokuthi le ndawo bahlasela futhi balimaze kakhulu, ngoba isikhumba sincane futhi bangabalimaza kalula. Lokhu kuyayicasula kakhulu inja, kepha futhi zingalahlekelwa izingxenye zendlebe uma zivunyelwe ukuqhubeka ngaphandle kokunakekela inja.
1 Ungazivimbela kanjani izimpukane ekuyeni ezindlebeni zenja?
2 Ungaphola kanjani amanxeba endiza ezindlebeni zenja?
3 Ngikwethusa kanjani izimpukane zenja yami?
3.1 Uviniga oxosha
3.2 I-Essence repelle
3.3 Oxosha Garlic
3.4 Ixosha izitshalo ezinamakha
3.5 I-Vaseline yezindlebe zezinja
3.6 Ukugeza okukodwa ngenyanga
3.7 Ukuwasha izingubo nge-baking soda
4 Kungani inja yami ithola izimpukane eziningi?
4.1 Ziyini izimpawu ze-myiasis?
4.2 Kuyini ukuxilongwa nokwelashwa?
Ungazivimbela kanjani izimpukane ekuyeni ezindlebeni zenja?
Into yokuqala kumele sibe nakho konke kuhlanzekile kakhulu ngoba siyazi ukuthi izimpukane zivame ukubheka ukungcola kakhulu, endaweni ehlanzekile kunzima kakhulu ukuthi izimpukane zize futhi uma inja ingaphandle kwendlu, kuyalulekwa ukuyigcina ngaphakathi ngezikhathi ezishisayo ukugwema ukulunywa.
Uma izindlebe zakho zisahlasela ngoba ungomunye walezo zinja ezizidonsayo, khona-ke kufanele thola a uketshezi lwalusetshenziselwa ukubethusa. Vele ubeke amaconsi ambalwa ezindlebeni futhi lokho kuzosiza ukwethusa izimpukane. Kodwa uma bekuzwise ubuhlungu, kufanele uwahlanze futhi ubelaphe, futhi ungalokothi ubeke uketshezi phezulu. Kungcono ukufaka umuthi wama-antibiotic ukuwelapha. Ngale ndlela, sizogcina izindlebe zakho ziphephile kulo lonke ihlobo.
Uma ukhuluma ngqo ngezindlebe zenja, kungenxa yokuthi impela kule ndawo yilapho lezo zimpukane ezicasulayo zingahlala khonaKuyathakazelisa ukwazi ukuthi izimpukane zingaluma futhi zisuse izingcezu zezindlebe zezinja, ngakho-ke kufanele sikugweme konke lokho ngazo zonke izindlela.
Ungaphola kanjani amanxeba endiza ezindlebeni zenja?
Izimpukane lapho zibona utwayi negazi ziheheka kakhulu, ngakho-ke uma sibona ukuthi inja yethu ilimele kakhulu, kufanele sifune isisombululo ngokushesha. Izinhlobo ezihlaselwa kakhulu yizimpukane yilezo ezinezindlebe eziqondile, njengoba kunjalo nangomalusi waseJalimane.
Kwesinye isikhathi inja ayikuzwa ukulunywa yizinambuzane futhi lapho esekhulile, ngeke esazizwa. Lokhu kuyakhathaza ngoba akugcini ngesilonda esibangelwa yiso kuphela kodwa futhi kungadala nezifo ezindlebeni, futhi nezimpukane zingabamba amaqanda ezindlebeni, okuthinta kakhulu impilo yenja.
Ukubona amanxeba, kubalulekile futhi kubalulekile ukuthi siye kudokotela wezilwane ukusihlola bese uqhubeka nokulungisa ukuhlanza, bese uqhubeka nokubulala amagciwane bese unikeza uhlobo oluthile lwama-antibiotic olusiza ukwelashwa, akumele sikhohlwe ukuthi kufanele usebenzise umuthi wokuxosha, lokhu kuzosisiza ukuthi sigweme ukulunywa kepha futhi kusisize ekuphulukiseni isilwane.
Masikhumbule ukuthi inja kumele ube nezindlebe ezihlanzekile nsuku zonke ukukwazi ukusebenzisa i-antibiotic yakhe futhi sikwazi ukusheshisa ukuphulukiswa- Kumele sigweme ngazo zonke izindlela izimpukane ezisondela kuye ngoba uma zibuya futhi ukuphulukiswa ngeke kwenzeke noma kuzohamba kancane kunokujwayelekile.
Ngikwethusa kanjani izimpukane zenja yami?
Ngiyacabanga Into yokuqala okufanele siyiqaphele nokubhekwa kwenja yethu. Ngemuva kwalokho nangesikhathi samahora ashisa kakhulu, kufanele sikugcine ngaphakathi hhayi ngaphandle.
Kufanele sigcine indawo ihlanzekile futhi ihlanzekile futhi sikwazi yenza oxoshiwe okuzenzela ukusiza inja yethu nezimpukane eziyisidina (yize sikwazi njalo thenga ukuphindisela okwenziwe ngomumo), ngakho-ke ngezansi sizokunikeza izindlela zokupheka ozozisebenzisa futhi ngaleyo ndlela ususe izimpukane.
Lokhu kunguketshezi olune-esidi olunephunga elinamandla kakhulu izimpukane ezingazithandi nhlobo, uviniga futhi unento okuthi uma iwela ngqo ezinambuzaneni ukunyakaza kwesinambuzane kuzohamba kancane futhi kuhamba kancane size sigcine sife.
Le ngxenye ibizwa ngokuthi i-acetic acid. Izithako zokwenza lesi simanga ngamaconsi ayi-10 eviniga emhlophe, induku yesinamoni nenkomishi yamanzi, hlanganisa konke kahle futhi kufanele ukuthele ebhodleleni le-spray naku-voila, singakusebenzisa ngokushesha.
Kepha ukuze leli khambi lisebenze, kufanele sinake ukuthi ezinye izimpukane zithanda ubumnandi, ngakho-ke uma izimpukane ezisendlini yakho ziyizihlahla zezithelo, le recipe ngeke isebenze nhlobo.
Le recipe ayixoshe izimpukane kuphela, ingabuye ixoshe omiyane. Amakha kawoyela ahlukahlukene anamandla kakhulu yingakho izinambuzane zibaleka, ngakho-ke kuhle ukuwasebenzisa ezingxenyeni ezihlukene zendlu nasemaphethelweni eminyango namawindi.
Ukwenza lokhu kuxosha uzodinga Amaconsi ayi-10 kawoyela ngamunye olandelayo: i-lavender, i-eucalyptus, i-mint ne-citronella. Lezi zingathengwa ezitolo zokudla ezahlukahlukene, kufanele ubeke konke esitsheni sokufafaza futhi ulungele ukufafaza ezingxenyeni ezihlukene zendlu futhi uzobona ukuthi lesi simangaliso sisebenza kanjani.
Enye yezindlela ukwenza eyodwa ngegalikhi. Izinambuzane ziyalizonda leli phunga Futhi njengoba unokuningi ekhaya njengoba sikusebenzisela ukudla, izimpukane ngeke zizame nokuncane ukungena ekhaya lakho, kube yikhambi elihle.
Ixosha izitshalo ezinamakha
Izitshalo ezinamakha zilungele ukuxosha izinambuzane ezithile. Khetha izitshalo ezingasebenza, njenge-lavender, i-mint, i-citronella, i-rosemary, i-sage, i-basil ne-oregano. Lokhu kungasisiza nathi ngoba yizitshalo esizisebenzisa ekhishini.
I-Vaseline yezindlebe zezinja
kuyinto izinhlobonhlobo ze-vaseline ezingathengiswa emitholampilo yezilwane wabo bonke osayizi kanye nabo bonke ubujamo. Isibonelo kukhona okubizwa ngeLamar ngakho-ke ungasho i-vaseline ethile, kungakuhle ukuthi uvakashele udokotela wezilwane ukuze unikeze leyo evumelana kakhulu nesilwane sakho.
Ukugeza okukodwa ngenyanga
Uma sigeza futhi sixubha inja yethu kanye noma kabili ngenyanga, akuyona inkinga enkulu ukuheha izimpukane, ngaphezu kokuzilungisa kwakhe nyangazonke, ugeza futhi abhulashe inja uma ubona izimpukane zizungeze ikakhulukazi ehlobo. Qiniseka ukuthi uhlanza futhi usike uboya benja endunu nasesitho sangasese, ukuze ingangcolisi uma isiphansi.
Izimpukane zivame ukubeka amaqanda azo endle. Uma inja inenhlanzeko embi kakhulu lapho isusa, kungenzeka kakhulu ukuthi ihlushwa i-infestation. Kufanele uqeqeshe ukuya endlini yangasese endaweni engadini okulula kakhulu ukuyihlanza.
Ukuwasha izingubo nge-baking soda
Geza okokulala kwenja okungenani kanye ngeviki, kuzovimbela iphunga namabala ekwakheni futhi ngokuzenzekelayo amaqanda ashiywe yizimpukane azosuswa.
Faka i-baking soda embhedeni ukuze ususe iphunga elinenkani. Isoda soda encane kufanele ifafazwe bese lisebenza cishe imizuzu eyi-15 bese liyikhuphula.
Kungani inja yami ithola izimpukane eziningi?
Uke waqaphela ukuthi inja yakho ithola izimpukane eziningi ngaphandle kwezinyathelo zenhlanzeko ozithathayo? Ngemuva kwalokho kufanele uxhumane nodokotela wezilwane, kahle uboya bakho bungaphathwa yisifo esibizwa nge-myiasis.
I-Myiasis ikhiqizwa yizibungu zezimpukane ezahlukahlukene zohlobo lweDiptera. Ingabe bondla abakutholayo, okungeyona into ngaphandle kwezicubu ezifile nezinto zomzimba ezinqwabelana ngaphakathi. Uma zingalashwa ngesikhathi, zizogcina zidale umonakalo omkhulu.
Kumele ugcine engqondweni ukuthi asikhulumi ngesifo esithinta izindlebe kuphela, kodwa lokho kungathinta noma iyiphi ingxenye yomzimba. Zonke izibungu ezidinga isilonda esivulekile, noma ngabe sincane kangakanani, ukulimaza isilwane.
Ziyini izimpawu ze-myiasis?
Izimpawu zalesi sifo esiyisidlakudla wakhe:
Iphunga elibi elivela endaweni ethintekile
Ukulunywa okukhulu kanye / noma ukucasuka
Inja ingase inikine ikhanda kakhulu
Futhi-ke okunye njengokukhungatheka nokucasulwa, okuzokwanda kuze kulungiswe.
Kuyini ukuxilongwa nokwelashwa?
Udokotela wezilwane uzobona ukuthi yi-myiasis ngokuhlolwa komzimba kuphela. Ngokushesha nje lapho iyithola, izohlanza kahle indawo, bese ifaka amaconsi azokhipha izibungu.
Iqiniso ngukuthi yebo. Ngezikhathi ezithile kufanele uhlole inja yakho ukuthi ayinakho yini ukulimala, ikakhulukazi ngemuva kokuya ebhishi noma epaki lapho lezi zilwane zivunyelwe ukukhululeka. Ngaphezu kwalokho, izohamba ibanga elide ekwandiseni ukuvikela kwakho i-myiasis nezinye izifo sebenzisa umkhiqizo we-antiparasitic, yomlomo neyesihloko.
Siyethemba ukuthi kukusizile 🙂.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » Ungazivikela kanjani izimpukane ekulumeni izindlebe zenja yakho
Futhi yiluphi uketshezi?
Ngihambile ngayobona udokotela wezilwane ovele wavula wangitshela ukuthi yimpuphu wanginika inani elibiza kakhulu.
USusy fontenla kusho
Sawubona Alejandro. Uketshezi engilusebenzisayo iBayofly, olunamaconsi ambalwa nsuku zonke selivele luyabavikela ezimpukaneni.
Phendula uSusy Fontenla
USonia Nelson kusho
Sawubona, sengivele ngazama konke nenja yami, ngesikhathi sasehlobo futhi kuze kube sebusika kunezimpukane eziningi njalo.
Inja yami iyiLabrador futhi odokotela bezilwane abanalutho olungangisiza. ngemuva kokugeza kubi kakhulu.
Phendula uSonia Nelson
U-Alaskan Malamute, inja enobudlelwano nenothando